Vatovavy fitovinany : nosoloina ny kaomadin’ny zandary | NewsMada
Vatovavy fitovinany : nosoloina ny kaomadin’ny zandary
Nisy ny famindram-pibaikoana teo amin’ny « commandant de groupement », miditra sy mivoaka, eo anivon’ny zandarimaria tany Vatovavy fitovinany, omaly.
Nandritra ny lanonana ara-miaramila fifamindram-pibaikoana izay notontosaina teo anivon’ny « Groupement ZP VA/FI », nisy ny fihaonana sy fifanakalozana teo amin’ny Jeneraly, talen’ny kabinetran’ny Seg, izay manao ny iraka mizaha ifotony sy manao tomban’ezaka any an-toerana amin’ny fanatanterahan’ny zandary ny toromarika avy amin’ny Seg, sy ireo mpitsara tompon’andraikitra.
Nahitana filohan’ny fitsarana sy ny tonian’ny mpampanoa lalana ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany any Mananjary sy Manakara.
Voaresaka tamin’izany fa mahita sy mahatsapa ny fiovana eo anivon’ny zandary ireo tompon’andraikitra ireo ka maniry ny hitohizan’izany. “Hitondra ny anjara-birikiny ho fiaraha-mientana amin’izany ezaka tsapa amin’ny zandarimaria izany ireo mpitsara” raha ny tenin’izy ireo.
Misy, noho izany, ny fiaraha-miasa amin’ny ady atao amin’ny fitsaram-bahoaka izay efa nanaovan’ireo mpitsara ireo fanentanana ihany koa tamin’ireo raiamandreny rehetra any ifotony ka maniry izy ireo ny hitohizan’ny fifanomezan-tanana eo amin’ny zandary sy ny mpitsara izay samy nahatsapa fa samy manana andraikitra amin’izany.
Ny tany Vondrozo sy Antsenavolo, nahatsapa ireo mponina sy ny raiamandreny ary ny ben’ny Tanàna fa efa azo tsapain-tanana ny fiovan’ny asa ataon’ireo zandary ka mahavelom-panantenana ny fanatontosan’izy ireo ny andraikiny sy ny fiverenan’ny fifampitokisana eo aminy sy ny vahoaka ho amin’ny fandriampahalemana.
Ho any Manambondro indray ny dian’ireto tompon’andraikitra ambony ireto manaraka ary hifarana any Nosy Varika izany iraka fizahana ifotony izany .